Ikhaya le-Imphal ukuze uphumle uze uphole - I-Airbnb
Ikhaya le-Imphal ukuze uphumle uze uphole
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguIrene
Efumaneka eMantripukhri, e-Imphal East, kungekudala ibe yindawo ephakathi esixekweni. Ipholile kwaye ipholile, kwaye indlu yam ikwindawo enkulu. Ifikeleleka lula, kwaye izithuthi, zombini ezifumanekayo zikawonke-wonke nezangasese ziyafumaneka. Kuthatha nje imizuzu elishumi ukufikelela kwimarike yasekuhlaleni kunye neevenkile zesebe. Ijikelezwe ziindawo zonqulo, njengeCathedral, itempile kunye ne-mosque. Kukho iivenkile eziliqela zokutya okukhawulezayo, iivenkile zokutyela kunye neehotele kufutshane.
I-Mantripukhri yindawo esandul 'ukwenziwa kuyo ikomkhulu lase-Imphal. Iinkundla Zomthetho kunye neNkundla Ephakamileyo yaseManipur sele zisebenza apha , kwaye iNdawo Entsha Yokulawula kaRhulumente waseManipur iyakhiwa. Yonke le ndawo ikhuselekile kwaye ipholile kwaye ikude ngokwaneleyo kwisihlwele esixekweni kodwa ikufuphi kuzo zonke iindawo ezibalulekileyo.
Singabantu abathandanayo abathathe umhlala-phantsi kwaye sikhona ukuze sithethe kwaye sibonise iindwendwe zethu kwaye silungiselele ukubukwa kwendawo ukuba siceliwe.